मध्यरात पाँचथर, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आरुबोटेमा नौ जनाको नृशंस हत्या भयो। सिंगो गाउँ शोकमा डुबेको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले वंश विनाशको योजनाले हत्या भएको देखाएको छ।
गत वैशाख २९ गते पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–४, पञ्चमीस्थित सिद्ध माविमा १० कक्षामा अध्ययनरत १५ वर्षीया शीतल योङ्हाङ लिम्बूको घाँटी रेटेर हत्या भयो।
शीतलकै प्रेमी फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पात्ले भञ्ज्याङका २० वर्षीय पदम तामाङ र उनका साथी भगीरथ बाँस्तोलाले हत्या गरेको पत्ता लाग्यो। हत्यामा संलग्न बाँस्तोला पक्राउ परे पनि हत्याका मुख्य योजनाकार प्रेमी तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन।
सोमबार पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा विद्यार्थीहरूले शीतलका हत्यारा पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। तर, त्यही सोमबारको मध्यराति फिदिमबाट ४७ किलोमिटर दक्षिणतर्फ पर्ने आरुबोटे गाउँमा नौ जनाको नृशंस हत्या भयो। गाडीको बाटो जाँदा फिदिमबाट आरुबोट पुग्न करिब ६० किलोमिटर पर्छ। २५ वर्षअघि भएको सामूहिक हत्याकै प्रकृतिको यो हत्या घटनाले स्थानीय चिन्तामा डुबेका छन्।
सारा गाउँ मस्त निदाइरहेको बेला मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ को आरुबोटेका बमकुमार फियाक लिम्बू र उनका जेठा ज्वाइँ धनराज सेर्मा लिम्बूको परिवारै विनाश हुने गरी मकुन्डोधारीले हमला गरे।
७४ वर्षीय बमबहादुर, उनकी ७० वर्षीया श्रीमती पुर्चीमाया फियाक, ज्वाइँ ४१ वर्षीय धनराज सेर्मा, ३६ वर्षीया जस्मिता फियाक, २६ वर्षीया मनकुमारी फियाक, १३ वर्षीया योवना सेर्मा, आठ वर्षीया मुना सेर्मा, छ वर्षीया इक्सा सेर्मा, १२ वर्षीया आशिका खजुमको हत्या भयो भने १२ वर्षीया सीता खजुम भने घाइते अवस्थामा भागेर बाँच्न सफल भएकी छिन्। उनको हात भाँचिएको र शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोट लागेको छ। उनले गाउँले र प्रहरीलाई बताएअनुसार मकुन्डो लगाएका मान्छे आएर जथाभावी धारिलो हतियारले प्रहार गरेका थिए।
मध्यरातमा भएको हत्याकाण्ड गाउँलेहरूले भने मंगलबार बिहान मात्र थाहा पाए। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर माखिमले पनि बिहान ६ बजे घटना थाहा पाए। माखिम प्रहरीलाई लिएर घटनास्थल पुग्दा घरभित्र र बाहिर रक्ताम्य शवहरू लडिरहेका थिए। भुइँमा रगतको आहाल थियो।
अध्यक्ष माखिमका अनुसार घटनास्थल पुग्दा घरबाहिर सिकुवामा ७४ वर्षीय बमकुमार फियाकको रक्ताम्य शव थियो। उनी बाहिर सिकुवामा सुतेका थिए। मकुन्डोधारीले उनलाई सुतिरहेकै ठाउँमा अनुहारभरि जथभावी हतियार प्रहार गरेर हत्या गरे। उनको अनुहार नचिनिने अवस्थामा थियो। जताजतै रगतैरगत थियो। उनको घरभित्र तीन शव रगतमा डुबेका थिए।
बमकुमारको घरभन्दा करिब १५ मिनेट उकालो हिँड्दा पुगिने ठाउँमा रहेको उनका ज्वाइँ धनराज सेर्माको घरमा झनै कहालीलाग्दो अवस्था थियो। घरभित्रको खाटमा दुई बालिकाको शव रक्ताम्य अवस्थामा थियो। तीन जनाको शव चाँहि एकैठाउँमा खप्टिएको अवस्थामा थिए। घटनास्थल पुगेका गाउँपालिका अध्यक्ष माखिमले भने, ‘रगतको खोलो बगेको त्यस्तो दृश्य हेर्न सकिएन। कल्पनै नगरेको घटना भयो।’
शंका गरिएका व्यक्तिकै शव भेटियो
बमकुमारको परिवारसँग उनका कान्छा ज्वाइँ मानबहादुर माखिमको सम्बन्ध राम्रो थिएन। मानबहादुरको घरमा बारम्बार झगडा पर्ने गरेको थियो। बमकुमारकी कान्छी छोरी मनकुमारी फियाकले श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेकी थिइन्। त्यसैले उनी माइतमै आएर बस्ने गरेकी थिइन्। उनीहरूबीच सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी प्रक्रियासमेत चलिरहेको थियो। मानबहादुर एक्लै घरमा बस्दै आएका थिए।
उनीसहित परिवारका सबैको हत्या भएपछि गाउँलेहरूले हत्यामा मानबहादुर पनि संलग्न हुन सक्ने शंका गरिरहेका थिए। प्रहरीले पनि मानबहादुरलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो। मंगलबार बिहान गाउँमा मानबहादुरको खोजी हुँदै थियो तर पत्ता लागेको थिएन। त्यही क्रममा मिक्लाजुङ, लिम्बा गाउँमा ‘मान्छे झुन्डिएको’ खबर आयो। मानबहादुरको घरबाट पैदल जाँदा करिब डेढ घण्टा लाग्ने लिम्बामा स्थानीय र प्रहरी पुगे। झुण्डिएको शव ज्वाइँ मानबहादुरको थियो।
शंका गरेकै व्यक्तिको शव भेटिएपछि घटना अनुसन्धान झन् जटिल बनेको छ। प्रहरीले घटनामा बाँचेकी बालिकाको बयान र उनको पारिवारिक अवस्थाको अनुसन्धान गर्दा मानबहादुरमाथि शंका गरेको थियो। बालिकाले बताएको हुलिया पनि मानबहादुरसँग मिलेको थियो। प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी केदार रिजाल हत्या घटनामा शंका गरिएका मानबहादुर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे पनि विभिन्न पाटाबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको बताउँछन्। पूर्वका मुख्य नाकाहरूमा समेत चेकजाँचमा कडाइ गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
‘वंश विनाशको योजना’
पाँचथर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार घटनास्थलमा प्रदेश प्रहरीको टोली, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली, संघीय प्रहरी इकाई धरानको टोली, पाँचथर र झापा जिल्लाको प्रहरी टोलीसमेत अनुसन्धानमा खटिएको छ।
बमकुमारको हत्या गरेपछि हत्यारा १५ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने धनराजको घरमा पुगेर परिवारैलाई हत्या गरेपछि प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले ‘वंश विनाशको योजना’ अनुरूप हत्या भएको अनुमान गरेको छ। मंगलबार घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले दुवै घरमा सिल गरी अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरसहितको टोलीले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। डीएसपी कुँवर भन्छन्, ‘प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा वंश विनाशको योजनाले हत्या भएजस्तो देखिएको छ। तर, हामी अन्य कोणबाट पनि हेरिरहेका छौँ। हाम्रो टिम अनुसन्धानमा लागेको छ। चाँडै केही निष्कर्ष आउँछ।’
मिक्लाजुङभन्दा करिब ७० किलोमिटर उत्तरपूर्वमा पर्ने लुङरुपाको टिम्मुरेमा २०५० वैशाख १७ गते यस्तै सामूहिक हत्याको घटना भएको थियो। स्थानीयका अनुसार कुबेर दुलालको घरमा भएको घटनामा कुबेरसहित उनकी आमा सरस्वती, बहिनी कृष्ण, भाइहरू उमेश र उद्धवको खुकुरी प्रहार गरेर हत्या भएको थियो।
कुकुरसहितको प्रहरी टोलीले अनुसन्धान गर्दा उनीहरूकै आफन्त ओमनाथ दुलालसहित आठ जना पक्राउ परेका थिए। उनीहरूले हत्या स्वीकार गरेपछि अदालतले २० वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। उनीहरू तीन वर्षअघि मात्र जेलबाट छुटेका छन्। फेरि त्यस्तै घटना दोहोरिएपछि स्थानीयवासी चिन्तामा परेको स्थानीय रमेश थापा बताउँछन्।
शोकमा डुब्यो आरुबोटे
मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने आरुबोटे गाउँ पहिला आरुबोटे गाविसका रूपमा चिनिन्थ्यो। गाविसका नौ वटै वडा अहिले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा नं. ३ बनेको छ। यो वडाको जनसंख्या साढे तीन हजारजति छ। लिम्बू समुदायको जनसंख्या धेरै रहेको यो गाउँ पाँचथरको पनि दुर्गम क्षेत्रमा पर्छ।
नौ जनाको हत्या भएपछि मंगलबार दिनभर गाउँलेहरू घटनास्थल पुगे। घटनास्थलमा गाउँले र बाहिरबाट आउनेहरूको भीड लाग्यो। घटनापछि गाउँलेहरू त्रास र शोकमा डुबेको मिक्लाजुङ–३ का वडाध्यक्ष हस्तराज फियाकले बताए। उनी भन्छन्, ‘गाउँमा रगतको आहाल देखेपछि गाउँलेहरू शोकमा डुबेका छन्। कसले यस्तो गर्‍यो भनेर त्रासमा छन्।’
हत्या भएकामध्ये दुई जना पुरुष र सात जना महिला छन्। हत्या भएका दुवै घरमा वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्र थिए। बमकुमारको घरमा वृद्ध बमकुमार मात्र पुरुष थिए भने धनराजको घरमा पनि उनी मात्र पुरुष थिए। अन्य महिला र केटाकेटी मात्र थिए। उनीहरूको हत्या योजनाबद्ध भएको भन्दै स्थानीयहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्।
संसद्मा पनि आवाज उठ्यो
पाँचथरको आरुबोटेमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डको विषयमा संसद्मा पनि आवाज उठेको छ। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद् पुष्पा भुसालले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरिन्। उनले घटनामा बाँच्न सफल भएकी बालिकाको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन र छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने माग गरिन्। सांसद् देवेन्द्रराज कँडेलले पनि घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्रीले सामूहिक हत्याकाण्डबारे सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने बताए।